Battery malite ịgba, Ogige trimmer, Mmetụta spana - FEIHU
Mmetụta malite ịgba
gbasara Anyịgbasara Anyị
Zhejiang Feihu New Energy Technology Co., Ltd.bụ ọkachamara emeputa na ekspootu nke incorporates imewe, R&D, mmepụta na ahịa maka ọhụrụ lithium ngwaọrụ. Feihu Technology nwere oge a osisi, mbụ na klas mmepụta na ule akụrụngwa, nke na-ekpuchi ebe ndị 30,000 square mita, mwube uzo nke 20,000 square mita. Ugbu a, e nwere ihe karịrị ndị ọrụ 400, gụnyere ndị ọkachamara ọkachamara kachasị dị elu, nzukọ dị ike na ndị ahịa ahịa.
Apụta ngwaahịaApụta ngwaahịa
21V Lithium batrị ike malite ịgba
16.8V Lithium batrị ike malite ịgba
12V Lithium batrị ike malite ịgba
Igodo Mmetụta Eriri
akụkọ kacha ọhụrụakụkọ kacha ọhụrụ
Gịnị Ka Know Maara Banyere Ọkụ eletrik
Egwuregwu eletriki igwe bụ igwe mkpọpu ala nke na-eji ọkụ eletrik eme ihe dị ka ike. Ọ bụ ihe a ot ngwaahịa ike ngwaọrụ na ndị kasị na-achọ ike ngwá ọrụ ngwaahịa. Nkọwa ndị bụ isi nke igwe eletriki eletrik bụ 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 32, 38, 49mm, wdg.
Etu ị ga - esi họrọ égbè mmiri
Site na mmụba nke nwe ụgbọ ala, ọnụahịa nke ịsa ụgbọ ala ebiliwokwa. Ọtụtụ ndị nwere ụgbọ ala na-eto eto agbanweela echiche ha ịhọrọ ịsa ahụ ụgbọ ala ụlọ dị ọnụ ala, ngwa ngwa, adaba adaba, dịkwa mma gburugburu ebe obibi. Mgbe ị na-asa ụgbọ ala n'ụlọ, ọ dịkwa mkpa ịnwe ụgbọ ala na-asa mmiri gu ...
Ọdịiche dị n'etiti Lithium Drill 12V na 16.8V
A na-ejikarị ike eme ihe na ndụ anyị kwa ụbọchị. Mgbe anyị kwesịrị egwupu oghere ma ọ bụ wụnye kposara n'ụlọ, anyị kwesịrị iji ike u. E nwekwara ọdịiche dị n’etiti ihe ngosi ike. Ihe ndị nkịtị bụ volts 12 na 16.8 volts. Gini bu ihe di iche na ha abua? Kedu ihe bụ ọdịiche ...
Na August 2020, ụlọ ọrụ anyị mepụtara ụdị ọhụrụ nke lithium ……
Na Ọgọstụ 2020, ụlọ ọrụ anyị mepụtara ụdị ọhụrụ nke ngwa ọrụ batrị lithium, egbe batrị batrị lithium na batrị lithium batrị, ma gafee asambodo GS, na-emeghe ụzọ maka ịbanye na ahịa Europe na America. Ngwaahịa na-ekpuchi 12V ugbu a na-ewu ewu ...